अपराधी एकैचोटी पत्ता लगाउन प्रहरीे जादुको छडी होइन–उज्वल - samabeshionline.com
अपराधी एकैचोटी पत्ता लगाउन प्रहरीे जादुको छडी होइन–उज्वल
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७५, सोमबार १४:२४
मिति २०७२ साल साउन १ गते बाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको रुपमा प्रहरी सेवामा प्रबेश गरेका उज्वल अधिकारी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा कार्यरत छन् । सधैं आफ्नो पेशा प्रति सकारात्मक सोच राखी काधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी बहन गर्न तत्पर रहने असई अधिकारी काभ्रे जिल्ला धुलिखेल न.पा. ४ स्थित भ्याण्डोलका स्थायी बासी हुन् । असई अधिकारी बुबा कृष्ण बहादुर अधिकार र आमा सुकुन्धारा अधिकारीका कान्छो छोरा हुन् । प्रहरी सेवामा रहदा अपराध अनुसन्धान तथा खबर संकलन समुहमा बसी काम गरेका उनी परिवार भन्दा टाढा रहेर देश र जनताको सेवामा रहदा आफुलाई एकदमै भायमानी ठान्छन । प्रस्तुत छ, उनै असई अधिकारीसँग इकमान लामाले गरेको कुराकानी:
तपाईले प्रहरी सेवा रोज्नुको कारण के हो ?
प्रहरी पेशा मात्र नभएर सेवा पनि हो । सत्य सेवा सुरक्षणम को मुल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउदा आन्दको महशुस हुनुको साथै कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्न म प्रहरी पेशामा आएको हु ।
प्रहरीमा नियुक्त भएर काम गर्दाको पहिलो दिनको अनुभव कस्तो थियो ?
पहिलो कुरा त खुशी हुने नै भयो । त्यसमा पनि प्रहरी भएर देश र जनताको लागि सेवा दिन पाउँदा एकदमै खुशी, उत्साह नै बढी थियो ।
सुरुको दरबन्दि र जागिरे जिवन कहाँबाट सुरुवात गर्नु भयो र के कस्ता अनुभव लिनुभयो ?
मेरो प्रथम दरबन्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा थियो। तालिम पश्चात २०७३ श्रावणबाट बारा जिल्लाबाट प्रहरी सेवाको अनुभव प्राप्त गरे । बारा जिल्ला नेपालको अपराधिक घटनाको दृष्टीकोणबाट निकै चर्चित जिल्ला हो । २०७२ को मधेश आन्दोलन ,अस्तुष्टी दल लगायत भुमिगत समुहहरुको उशृङखल गतिबिधी भईरहने गर्थियो । खुल्ला सिमानाको कारणले तस्करी, अपहरण जस्ता अपराधहरु भईरहन्थ्यो । अपराधीहरुको खोजी देखी अपराध नियन्त्रणमा उल्लेखनिय भुमिका निर्भाह गरियो । बारा जिल्लाबाट प्रहरीले गर्नु पर्ने प्रहरीकार्यका तिता मिठा अनुभवहरु थुप्रै छन् ।
तपाईले प्रहरी र एउटा आम जनतामा के फरक पाउनुभयो ?
प्रहरी पनि समाजबाटै आएको जनता हो तर उसले कानुन पालना गर्ने र अरुलाई पनि कानुनको कार्यन्वयन गराउनु पर्ने हुदा जनता जस्तो खुल्ला जिवन सैली हुदैन । प्रहरी भै सकेपछि बोली बचन देखी आचरण ब्यवहार राम्रो हुनुपर्दछ । पाईला पाईलामा सोचेर हिड्ने गर्नु पर्छ । धेरै फरक छ नि ।
बारा बस्दा के कस्ता सिर्जनशिल कामहरु गर्नु भयो र अब के के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
बारामा बस्दा सामुदायिक प्रहरि अन्तरगत जेष्ट नागररिक भेघाट कार्यक्रम, ट्राफिक नियम सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम,जबर जस्ती करणी तथा आत्म हत्या सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम, घरेलु हिंसाका पिडितको अनुगमन जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु कार्यक्रम संयोजकको रुपम खटी संचालन गरियो । रामेछापमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम, सरसफाई, लागु औषध, बरजस्ती करणी अपराध जस्ता बिषयहरुमा चेतनामुलक नाटक तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने योजना छ ।
ड्युटिमा काम चाप कत्तिको हुन्छ ?
प्रहरी सेवा गरेको आखिर ड्युटीकै लागि हो, ड्युटीमा कामको चाप हुने नै भइ हाल्यो नि । विशेषगरी चाडपर्व, हुलदंगासंगै भिआईपिहरुको अगमान हुदाँ कामको चाप धेरै हुने गर्छ ।
यो पेशामा खुशी लाग्ने पक्ष के हो, कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
देशको विभिन्न ठाउँबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी सबै जना एकै परिवारको जस्तो सामुहिक कार्यबाट देश र जनतालाई सेवा प्रदान गर्न पाउँदा खुशी लाग्छ ।
दशै नजिकिदै जादा के कस्ता सुरक्षा योजना हरु छन् त रामेछापमा ?
दसै लक्षित गरी हामिले मन्थली बसपार्कमा प्रहरी सहायता कक्ष स्थापना गरी यात्रुहरुलाई सहज बाताबरण दिने योजना बानाएका छौ । चाडबाडको समयमा हुने चोरी लुटपाट हुनबाट जोगिन र तत्काल प्रहरी परिचालन गर्न सादा पोशाक प्रहरीहरु मुख्य बजार एरियामा परिचालन गर्ने छौ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाट नै cctv (सिसिटिभि) बाट प्रत्यक्ष हेरिनेछ ।
अहिले देशमा घटिरहेको हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरुले गर्दा प्रहरीप्रति जनताको विश्वास घटिरहेको जस्तो देखिन्छ नि ?
हो, झट्टा बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । तर प्रहरीे पनि जादुको छडी त होइन एकैचोटी थाहा पाइ हाल्न । कुनै पनि घटनाको वास्ताविक प्रमाणमुखी अनुसन्धानबाट मात्र अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसको लागि घटनाको प्रकृति अनुसार अनुसन्धानमा समय लाग्ने गर्दछ । अनुसन्धानमा कतिपय कुराहरुको वास्ताविक प्रमाण नभेटेको अवस्थामा तत्काल अपराधी सार्वजनिक गर्न नसक्दा प्रहरीप्रति जनताको विश्वास घटेको जस्तो मात्र देखिएको हो । खासमा भन्ने हो भने चाहिँ प्रहरी र जनताको विश्वास घटेको छैन, म त झन्् बढिरहेको देख्छु ।
नजिकिदै गरेको विजय दशमी तथा शुभ दिपावली–२०७५ को समस्त नेपालीहरुमा शुभकामना दिन चाहान्छु । मेरो केही विचारहरु राख्ने अवसर दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ।
संसद भवनमा बजेट भाषण भइरहदा प्रतिपक्ष दलका यी नेता मस्त निन्द्रमा
गायिका एंव मोडल सम्झनाको मार्मिक गीत “किन धोका दियौ “सार्वजनिक (भिडियो सहित)